Haddii aad tahay bukaan cusub, fadlan raac tallaabooyinka hoose:
Codso ballan adoo adeegsanaya MyChart (waxaa lagugu hagi doonaa talaabooyinka lagu abuurayo koontada Bukaanka Cusub); ama, haddii ay tahay inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah, wac PWHealth si aad ballan u qabsato.
Haddii aad ballan qabsatay iyo haddii kaleba, fadlan buuxi Diiwaangelinta Bukaannada Cusub. Waxaad ku buuxin kartaa foomkan khadka tooska ah ama daabacan kartaa foomka oo aad ku dhammaysan kartaa gacanta.
Markuu dhammaystirmo fadlan daabac, saxeex oo la imow ballantaada ugu horreysa.
Foomka Bukaanka Cusub
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka ayaa badalay siyaasada iyo nidaamka codsiyada dhamaan diiwaanada caafimaadka. Si loo daboolo kharashka keydinta, koobiyeynta iyo dirista waxaa hadda jira lacag dhan oo bog ah si loo sii daayo wixii diiwaanno caafimaad ee bukaanka ah. Fadlan la soco in go'aankan lagu gaadhay si waafaqsan HIPAA iyo Sharciga Gobolka Ohio. Kharash kasta oo codsi rikoor ah wuu ku kala duwanaan doonaa tirada bogagga la codsaday iyo kharashka boostada.
Waxaa muhiim u ah kuwa codsanaya diiwaanada dhex-dhexaadnimada inay ku gaar noqdaan waxa ay codsanayaan, ha ahaato jaantuska oo dhan ama qaybo gaar ah oo keliya. Mar haddii Isuduwaha Diiwaanada Caafimaadka uu helo dalabka isla markaana uu go aansado kharashka diiwaanka ee shaqsiga la ogaysiin doono.
Dhammaan khidmadaha waa in si buuxda loo bixiyaa ka hor inta aan la sii deyn diiwaannada caafimaadka. Codsiyada diiwaanka caafimaadka ee dhammaaday sanadka 2003 ama wixii ka horreeyay waxay qaadan doonaan illaa 5 maalmood oo shaqo si looga shaqeeyo. Waanu qadarinaynaa dulqaadkaaga. Xusuusin: Lacagtaas waxaa lagu aqbalaa goob kasta oo xafiis ah, ama haddii aad doorbido, waxaan lacagta ku qaadan karnaa taleefan oo wata kaar weyn oo deyn oo si dhakhso leh loogu shaqeynayo
Codsiga Diiwaanada Caafimaadka